Sababta Uu Ousmane Dembele U Diiday Inuu Qeyb Uga Noqdo Heshiiskii Kooxda Barcelona Ee Neymar Oo La Ogaaday - Gool24.Net
Sababta Uu Ousmane Dembele U Diiday Inuu Qeyb Uga Noqdo Heshiiskii Kooxda Barcelona Ee Neymar Oo La Ogaaday
September 5, 2019 Saed Balaleti
Ousmane Dembele ayaa u muuqday mid fure u ah inuu Neymar ku soo laabto kooxda Barcelona xagaagan, laakiin xiddiga reer France ayaa diiday inuu soo gabagabeeyo waayihiisa Camp Nou oo uu u wareego Paris.
Wargeyska Faransiiska L’Equipe ayaa shaacisay dhowrka sababood ee uu weeraryahankii hore ee Borussia Dortmund uu u qaatay go’aankaan.
Jariirada ayaa tilmaamtay in sababta ugu weyn ay tahay in Dembele uu dareemayo inuu joogi meeshii uu doonayay islamarkaana uusan dooneynin inuu ka tago kooxda Catalans, waxaa la sheegay in Barcelona ay tahay kooxda riyadiisa, islamarkaana uu cadeeyay inuusan ka baqeynin inuu tartamo booskiisa kooxda koowaad xitaa haddii uu Neymar yimaado.
“Waxaan u dagaalami booskeyga halkaan” ayaa aheyd fariintii uu Dembele gudbiyay, waxaa intaas dheer inuusan qiimo weyn u arkin inuu ka ciyaaro horyaalka Faransiiska. Sababtana waxay tahay in riyadiisa ugu weyn ee ah inuu ku guuleysto Ballon d’Or inuu aaminsan yahay inuu ku gaari karo kooxda La Liga ka dhisan.
Xiriirka ka dhaxeeya Dembele iyo tababare Thomas Tuchel oo haatan ah tababaraha PSG waa mid aad u fiican, labada nin waxay hal xilli ciyaareed isla joogeen Dortmund laakiin waxaa taas sii dheer in xiriir shaqsi ah uu ka dhaxeeyo.
Sida ay sheegtay L’Equipe, Dembele iyo Tuchel si joogta ah ayay u hadlaan, waxayna isagu hambalyeeyaan guulahooda. Xiriirka xoogan ee ka dhaxeeya labadooda ayaana sabab u ahaa in Tuchel uu codsado in Ousmane Dembele lagu darro wadahadalada Neymar.
Laakiin waxaa nasiib darro ku aheyd tababare Tuchel in Dembele uu doortay inuu guulo ku gaaro midabada kooxda Barcelona.